Ukwethulwa okuningiliziwe kocingo olujwayelekile oluhlabayo
Ucingo oluhlabayo lusontekile futhi lwelukiwe ngomshini wensimbi owenziwe ngokuphelele. Ngokuvamile kwaziwa njenge-iron tribulus, ucingo oluhlabayo, ucingo oluhlabayo. Izinhlobo zemikhiqizo eqediwe: ukwaluka kwentambo okulukiwe okungabili nentambo ephothiwe ephindwe kabili. Impahla eluhlaza: ikhwalithi ephezulu yekhabhoni st ...
Isingeniso senetha le-gabion
Inetha leGabion lingasetshenziselwa ukwesekelwa kwemithambeka, ukusekelwa komgodi wesisekelo, ukufafazwa kokhonkolo we-gabion net ophahleni lwamadwala, uhlaza (uhlaza), ujantshi nothango lokuhlukaniswa komgwaqo omkhulu, futhi kungenziwa futhi amakheji namata ometha wokuvikela imifula, amadamu futhi se ...
Hexagonal umshini net ukwamukela phambili futhi ukuhlanekezela ukusonta isimiso
Hexagonal wire anezikhala umshini zingahlukaniswa ngezigaba ezimbili, omunye bendabuko roller ukungezwani ukungeleza ezinamacala wire anezikhala, kanti omunye uhlobo olusha lwezinhlangothi eziyisithupha wire Wire Mesh umshini ngqo eliqhutshwa w ...
Ukuqhathanisa umshini wocingo olulodwa wocingo lokuxhuma umshini nomshini wocingo wocingo ophindwe kabili
1. Izidingo zikasilika: 1) Umshini wocingo ombaxambili unezidingo eziqinile ngokweqile ezintweni zokusetshenziswa. Ngasikhathi sinye, amandla athambile nanzima okokufaka kwezintambo ezimbili kufanele kuhambisane nokukhiqiza. Lapho amandla womunye o ...